"Afrikaan Ilma Jabaa,Ummatii Afrikaa Kibbaa Ammoo Abbaaa Dhabe,"Perzd. Zuumaa
Perezidaantii Afriikaa Kibbaa, Jaakoob Zuumaa Du'a Maandellaa Labse
WASHINGTON,DC — Akka jecha perzdaantii Afrikaa Kibbaa Jaakoob Zuumaatti, Maandellaan lubbuu dhabuun Afrikaa Kibbaatii guyyaa gadda guddaati.
“Guyyaan kun dhugumaanuu guuyaa naasuu guddooti.Taatullee guyyaa waadaa keenna itti jabeeffannu.Waadaa Madiibaan jiraateef,nagaan fi araraan jiraachuuf fi akka Afrikaan guddattee Addunyaatti makamtuuf boqonnaa dhabe.
Du’a qabsaahaa mirga ilmaan namaa,Nelson Maandellaatiifii jedhanii alaabaa Afirkaa Kibbaa gadi buusanii fannisan.Muddee 9tti ammoo istaadiyoomii Afrikaa Kibbaa ganna sadiin duratti dorgommii waancaa kubbaa miilaa itti qopheessanitti bahee ‘Madiibaa’ faarsa.
Perzdanatii Maandellaa Muddee 15,2013 awwaalan.Gaafa perzdaanti kana awwalaan ammoo bulchoota addunyaa fi namii bebeekaman addunyaa awwaala kanatti dhufa aeegan.
Namii Afrikaa Kibbaa waan perzdanati Maandellaan ummataaf hojjate faarsaa gama kaaniin ammoo waan innii jalqabe fixuuf faarsa.Maandellaan Muddee 5,2013 gara halkan walqixxeetti ganna 95essootti lubbuu dhabe.